Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Riix halkan haddii kani yahay war-saxaafadeedkaaga! » Tallaalada COVID ee Carruurta Degdeg Dhakhaatiirta ER dheh
Sida tallaalada COVID-19 ay diyaar u yihiin carruurta da'doodu u dhaxayso 5 ilaa 11, Kulliyadda Dhakhaatiirta Degdegga ah ee Mareykanka (ACEP) waxay ku boorinaysaa daryeelayaasha iyo qoysaska inay is tallaalaan oo ay qaadaan tillaabooyinka lagama maarmaanka ah si loo ilaaliyo carruurta inta lagu jiro fasaxa soo socda iyo xilliga hargabka.
"Dhakhaatiirta deg-degga ah ee waddanka oo dhan waxay sii wadaan inay arkaan sida khatarta ah in caabuqa COVID-19 uu u noqon karo bukaannada da 'kasta leh, gaar ahaan kuwa aan la tallaalin," ayuu yiri Gillian Schmitz, MD, FACEP, madaxweynaha ACEP. "Mahadsanid, tallaaladu waa badbaado, waxtar leh oo hadda waa la heli karaa. Talaalka carruurtaada waa mid ka mid ah siyaabaha ugu wanaagsan ee aad ku ilaalin karto qoyskaaga oo aad nagu caawin karto inaan ka adkaano fayraska."
Carruurta aad ayay ugu yar tahay inay la kulmaan jirro daran COVID-19 marka loo eego dadka waaweyn, laakiin halista COVID-1.9 wali waa muhiim. Qiyaastii 5 milyan oo carruur ah oo da'doodu u dhaxayso 11 ilaa 19 ayaa laga helay COVID-8,300, sida ay sheegtay Xarumaha Xakamaynta iyo Kahortagga Cudurrada (CDC). Waxaa jiray ilaa 94 oo cusbitaal ah oo mid saddexaad uu u baahan yahay daryeel degdeg ah iyo ugu yaraan 5 dhimasho ah oo ka tirsan kooxdaas. CDC waxay ku talinaysaa in qof kasta oo da'diisu tahay 19 iyo ka weyn uu qaato tallaalka COVID-XNUMX.
Dhakhaatiirta degdega ah waxay rabaan inay u xaqiijiyaan daryeelayaasha in tallaalada jira ay yihiin kuwo badbaado leh oo waxtar leh. Horumarinta tallaalka laguma degdegin, alaabooyinkanina waxay raacaan nidaam adag si ay ula kulmaan dhammaan tallaabooyinka badbaadada ee Maamulka Cuntada iyo Dawooyinka (FDA). Sida tallaalka dadka waaweyn, dad aad u yar ayaa la kulma waxyeellooyin. Dhibaatooyinka soo raaca ee ugu caansan ee la diiwaan geliyo inta lagu guda jiro hababka badbaadada ee ballaaran ayaa ah kuwa fudud oo lagu maarayn karo guriga, oo ay ku jiraan cudud xanuun, casaan meel u dhow goobta la duro, ama daal.
Qof kastaa wuxuu qaadi karaa tillaabooyin uu midba midka kale ku ilaalinayo isagoo is tallaalaya oo raacaya tilmaamaha maxalliga ah, fogeynta bulshada, iyo daboolaya wejigooda. CDC waxay ku talinaysaa in daryeelayaashu ay kormeeraan xidhiidhka dhow ee ubadku la leeyahay dadka kale oo ay qaadaan tillaabooyin ay ku ilaalinayaan ilmaha haddii qof qoyska ka mid ahi uu bukoodo ama uu yeesho calaamadaha COVID-19. Taas waxaa ka mid noqon kara in ilmaha lagu hayo guriga iyo raadinta daryeel habboon haddii ilmuhu buko. Carruurta iyo dadka waaweynba way faafin karaan fayraska xitaa haddii ay asymptomatic yihiin.
Ilaalinta dheeraadka ah inta lagu jiro waxa noqon kara xilliga hargabka khatarta ah, takhaatiirta degdega ah waxay ku dhiirigeliyaan daryeelayaasha iyo carruurta inay iska tallaalaan COVID-19 iyo ifilada labadaba. Waa ammaan in isku mar la qaato tallaalka hargabka iyo tallaalka COVID, mana aha goor dambe in la qaato tallaalka hargabka waqtiga bilowga cimilada qabow iyo xilliga fasaxa ee mashquulka ah.
Sida daryeelayaasha ay ula socdaan carruurta calaamadaha COVID-19, sida qandho badan, cune xanuun, qufac, calool xanuun, ama madax-xanuun, waxaa muhiim ah in la ogaado marka la aadayo waaxda gargaarka degdegga ah, haddii ay tahay COVID-19 ama mid kale jirro ama dhaawac.
"Waxaa jira calaamado xaalad degdeg ah oo aan waligood la iska indho-tiri karin," ayuu yiri Dr. Schmitz. "Dhakhaatiirta deg-degga ah waxaa loo tababaray inay wax ka qabtaan dhammaan noocyada cabsida caafimaadka, qof walbana wuxuu hubin karaa in waaxda gargaarka degdegga ah ay tahay meesha ugu ammaansan, bukaannada da 'kasta, marka ay ku jiraan xaalad caafimaad oo degdeg ah."